“ရွှေမြန်မာ”: August 2010
ဘလော့ဂ်တွေ ဘယ်လောက် အရေးပါလာမလဲ
အခုတစ်လော blog တွေ၊ wiki တွေ အပြင် ကိုယ်ပိုင်ဒိုမိန်းတွေနဲ့ အုပ်စုတွေ၊ website တွေ တိုးတက်များပြားလာတာကို အချိန်တိုအတွင်းမှာ တွေ့ရှိလာရပါပြီ။ ဒါတွေကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် လူငယ်လူရွယ်တွေ အချိန်ကို အလဟဿ မကုန်ဆုံးဆောင် အသုံးချတတ်လာကြပြီလို့ မှန်းဆလို့ ရပါတယ်။ ဒါဟာ ဖြစ်လည်း ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ တိုးတက်နေတဲ့ ခေတ်အခြေအနေမှာ နည်းပညာတွေ တစ်နေ့ထက် တစ်နေ့ အသစ်အသစ်တွေ ပေါ်ထွက်လာနေချိန်မှာ ကျွန်မတို့တစ်တွေဟာ ခေတ်နောက် ပြတ်ကျန်လို့မရပါဘူး။ မီဒီယာစတိုင်သစ်တွေနဲ့အတူ တတ်နိုင်သရွေ့ ရှေ့ကို အရောက်လှမ်းနိုင်ဖို့ ကြိုးစားကြရမှာပါပဲ။ နောက်ပိုင်း blog တွေ များပြားလာတာနဲ့အမျှ အများရဲ့အမြင်မှာ ကွဲပြားခြားနားစွာ မြင်တတ်ဖို့လည်း လိုအပ်တယ်လို့ ထင်မြင်မိပါတယ်။ blog တွေဟာ လမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းအတွက် ရည်ရွယ်တာ မဟုတ်ပါဘူးဆိုတာပါပဲ။ ကိုယ်ပိုင် ခံစားချက်၊ ကိုယ်ပိုင်တွေ့ရှိချက်၊ ကိုယ်ပိုင်စွမ်းဆောင်ချက်တွေနဲ့အတူ အနုပညာတွေ၊ နည်းပညာ ဗဟုသုတတွေ၊ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး အားလုံး အားလုံး လက်လှမ်းမီသလောက် ၀ါသနာအရင်းခံပြီး ဖြန့်ဝေနေကြတာဟာ အလွန်တရာ ၀မ်းသာမိပါတယ်။ ယာဉ်စည်းကမ်းလမ်းစည်းကမ်းရှိသလို၊ လူမှာလည်း လူ့စည်းကမ်းရှိသလို ဘလောဂ့်တွေမှာလည်း ဘလောဂ့်စည်းကမ်းဆိုတာ ရှိပါတယ်။ ဘလောဂ့်ဂါတစ်ယောက်ဟာ ကိုယ်ဖန်တီးတဲ့ အနုပညာအတွက် ကိုယ်ကိုယ်တိုင် တာဝန်ယူရပါတယ်။ မှန်ကန်တဲ့သတင်း၊ မှန်ကန်တဲ့လုပ်ဆောင်ချက်၊ မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာ ဒါတွေဟာ တိကျမှန်ကန်မှုရှိမှသာ ကိုယ့်ဘလောဂ့်မှာ တင်ပြကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ငါသာစေ သူ နာစေဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ လုပ်ဆောင်ခြင်းမျိုးက ရေရှည်မှာ တည်မြဲမှု မရှိရုံမျှမက ဘလောဂ့်ဂါ အများကိုလည်း ယုံကြည်မှု ကင်းမဲ့စေတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်တဲ့အတွက် ဘလောဂ့်ဂါတိုင်း နားလည်လက်ခံသဘောပေါက်ကြပါတယ်။ ကိုယ့်အမြင် သူ့အမြင် ဖလှယ်ခြင်းဟာလည်း ကောင်းတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်နဲ့ အောင်မြင်တိုးတက်မယ့် တက်လှမ်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြင်ပ ဘလောဂ့်ဂါများ နေရာအနှံ့အပြားမှာ များပြားနေတာကို တွေ့ရှိခြင်းအားဖြင့် ကိုယ့်နိုင်ငံသားတွေလည်း ဒီလို မီဒီယာအသစ်တွေ အများအပြား တိုးတက်စေချင်တာ အမှန်ပါ။ ဘလောဂ့်ဂါအချင်းချင်း ရိုင်းပင်းကူညီပြီး ပြည်ပ မီဒီယာသမားတွေ ကိုယ့်ဝန်းကျင်းအတွင်း မ၀င်လာနိုင်အောင် အားလုံးကြိုးစားကြစေချင်ပါတယ်။ ပြည်ပနိုင်ငံသား ဘလောဂ့်တွေကို လေ့လာမိသလောက် ဘလောဂ့်ဂါတွေရဲ့ ၃၅ ရာခိုင်နှုန်းကသာ ဘလောဂ့်တင်ခြင်းကို ဂျာနယ်လစ်ဇင်ရဲ့ ပုံစံသစ်တစ်မျိုးအဖြစ် ရှုမြင်ကြပြီး ကျန် ၆၅ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးကတော့ ယင်းသို့ မယူဆပါဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ အဲ နောက်ပြီး မိမိတို့ဟာ တစ်ခါတစ်ရံမှာဖြစ်စေ၊ မကြာခဏဖြစ်စေ မိမိတို့သတင်းမှာ ဖော်ပြမယ့် အချက်အလက်တွေရဲ့ မှန်ကန်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး စစ်ဆေးအတည်ပြုဖို့အတွက် အချိန်ပိုပေးပြီး လုပ်ကြတယ်လို့ ဆိုသူ အရေအတွက်ကတော့ ၅၆ ရာခိုင်နှုန်းမျှသာ ရှိပါတယ်။ ဒီတော့ ဘလောဂ့်ဆိုတာနဲ့ တစ်ခုထဲသော အကြောင်းအရာကို မမြင်စေချင်ပါဘူး။ ကိုယ့်ရေးသားချက်ကို ကိုယ်တာဝန်ယူရပါမယ်။ ဘလောဂ့်ဂါ တော်တော်များများ အင်း ပြောရရင်တော့ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာ သူတို့ရဲ့ သတင်းတွေကို အွန်လိုင်းတင်ရာမှာ သူတို့ရဲ့ အမည်ဝှက်ကိုသာ ဖော်ပြကြပါတယ်။
အလုပ်လုပ်ကြသူများရဲ့ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းဟာ လုပ်ငန်းခွင်တာဝန်များကြောင့်
ညအချိန်မှာ အိပ်မပျော်တဲ့ ဝေဒနာတွေ ခံစားနေကြရကြောင်း ခုတစ်လော
သတင်းကြားနေရပါတယ်။ ဒီတော့ ကျွန်မ သိတဲ့နည်းလေးကို
ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါရစေ။ အိပ်မပျော်ခြင်းအတွက် နည်းလေးကတော့ ရေနွေးနဲ့
ရေနွေးကြောင့် ကျယ်ပွလာတဲ့ အရေပြားပေါ်က သွေးကြောကလေးဆီ သွေးလှည့်ပတ်
ရောက်သွားတဲ့အခါ ဦးနှောက်ကို သွေးအပို့နည်းသွားတတ်ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ
အိပ်ချင်စိတ် ဖြစ်ပေါ်ပြီး အိပ်ပျော်စေတာလို့ လက်လှမ်းမီသလောက်
ဒါကြောင့် ညဘက်အိပ်ခါနီး ရေချိုးတဲ့အခါ ရေနွေးထဲကို ရနံ့ဆီတစ်မျိုးမျိုး
(ဥပမာ - လာဗင်ဒါဆီ၊ လိုင်လိုင်ဆီ) ကို (၈) စက်ခန့်ထည့်ရောပြီး
ရနံ့ဆီတွေဟာ အကြောအခြင်တွေ ပြေလျော့ပေးနိုင်တဲ့ သတ္တိထူးတွေရှိတဲ့အတွက်
အကြောပြေပြီး အိပ်ပျော်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သုတေသနဂျာနယ်တစ်ခုမှာ
ရေနွေးချိုးခြင်း (warm bath)နဲ့ပတ်သက်ပြီး သာဓကတစ်ခုကို ဖော်ပြထားတာ
တွေ့ရှိခဲ့တယ်။ အပူချိန် (၁၀၀) ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိတဲ့ ရေချိုးခြင်းဟာ
ငိုက်မျဉ်းခြင်းကို ဖြစ်စေတဲ့အတွက် အိပ်မပျော်သူများ အတွက် ထူးတဲ့
နည်းတစ်ရပ်အဖြစ် ပြောထားလို့ ကျွန်မ လက်တွေ့စမ်းသပ် ခဲ့ဖူးပါတယ်။
ဘယ်လောက်တောင်လဲဆိုရင် နေ့လည်ဘက် နေပူလို့ ဘုံဘိုင်က ရေ နွေးနေတာကို
လက်နဲ့ သုံးလေးခါဆေးလိုက်မိတော့ အိပ်ငိုက်တာ မျက်လုံးတောင်
မဖွင့်နိုင်အောင် ရုပ်ပျက် ဆင်းပျက် ဖြစ်ခဲ့ဖူးလို့ ညဘက်
အိပ်မပျော်သူများအတွက် နည်းကောင်းတစ်လက်အဖြစ် တင်ပြလိုက်ရခြင်း
Information Technology Professional Examination Council (ITPEC)
ITPEC = Information Technology Professional Examination Council
မြန်မာနိုင်ငံ အပါအ၀င် အဖွဲ့ဝင် (၇) နိုင်ငံပါဝင်တဲ့ IT Professional
ဆိုင်ရာ Skill များ သတ်မှတ်ပြီး စာမေးပွဲများ စစ်ဆေးပေးတဲ့ အဖွဲ့အစည်းပါ။
ITPEC မှာ မြန်မာနိုင်ငံက MCF (မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာအသင်းချုပ်)၊
မလေးရှားက (METEOR)၊ မွန်ဂိုလီးယားက (NITP)၊ ထိုင်းက (NECTEC)၊ ဂျပန်က
(IPA)၊ ဗီယက်နမ်က (VITEC)၊ ဖိလစ်ပိုင်က (PhiINITS) စတဲ့ အဖွဲ့တွေ
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကျင်းပပေးတဲ့ စာမေးပွဲက FE (Fundamental Information
Technology Engineer) ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နှစ်လျှင် နှစ်ကြိမ်
အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအားလုံးမှာ တစ်ပြိုင်နက် စာမေးပွဲကျင်းပစစ်ဆေးပါတယ်။
နှစ်စဉ် April နှင့် October လတွေမှာ စစ်ဆေးပါတယ်။ FE စာမေးပွဲ
စစ်ဆေးချိန်က စုစုပေါင်း (၅) နာရီဖြစ်ပါတယ်။ နံနက်ပိုင်းမေးခွန်းက (၂)
နာရီ (၃၀) မိနစ်။ ညနေပိုင်း မေးခွန်းက (၂) နာရီ (၃၀) မိနစ်။
၃။ စာမေးပွဲဖြေဆို အောင်မြင်ပြီး လက်မှတ်ရရင် ဘယ်လိုအကျိုးရှိမှာလဲ
(၁) မိမိ၏ အိုင်တီဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှုကို
ဂျပန်နိုင်ငံမှာ IPA (Information-technology Promotion Agency)
ဆိုတဲ့အဖွဲ့ရှိပါတယ်။ အဲဒီအဖွဲ့အောက်မှာ JITEC က ITEE
(Information-Technology Engineers Examination) တွေကို စစ်ဆေးနိုင်ဖို့
Standard Skill များ ပြုစုခြင်းမှ အစ ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။
အဲဒီစာမေးပွဲတွေနဲ့ လက်မှတ်တွေကို အထက်တွင် ဖော်ပြထားသော ITPEC
သဘောကျလက်ခံကြပြီး သူတို့နဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်
ITPEC-(FE) စာမေးပွဲအောင်ပြီး လက်မှတ်ကိုင်ထားနိုင်ရင် မိမိ၏
အိုင်တီဆိုင်ရာ အခြေခံအဆင့် အရည်အချင်းကို နိုင်ငံတကာ 'စံ'တစ်ခုနဲ့
(၂) အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ Cross Certification ဖြစ်ခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြေဆိုအောင်မြင်တဲ့ ITPECFE စာမေးပွဲအောင်လက်မှတ်ကို
ကျန်နိုင်ငံများကပါ အသိအမှတ်ပြုတဲ့အတွက် အဲဒီနိုင်ငံတွေမှာ
အိုင်တီအလုပ်တွေ၊ အိုင်တီဆိုင်ရာ ပညာသင်ယူမှုတွေ၊ အိုင်တီဆိုင်ရာ
Scholarship လျှောက်တာတွေစတဲ့ ကိစ္စတွေမှာ များစွာ အထောက်အကူပြုမှာ
၄။ ITEPC စာမေးပွဲဖြေဆိုရန် အရည်အချင်းကန့်သတ်ချက်ရှိပါသလား
အရည်အချင်း ကန့်သတ်မှုမရှိပါ။ သို့သော်လည်း အနိမ့်ဆုံးအားဖြင့်
တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ အောင်မြင်ပြီးသူများ ဖြေဆိုရန် အကြံပြုပါသည်။ ITPEC
ကို IT ဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုလိုသူများ၊ ကွန်ပျူတာနှင့်
၅။ စာမေးပွဲဖြေဖို့ ဘာတွေလေ့လာထားရမလဲ.....
7) Database Technlogy
8) Current IT Topics (Applications) စသည့် ဘာသာရပ်များကို
ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်အောင် လေ့လာထားရပါမည်။ စာမေးပွဲကို English
၆။ စာမေးပွဲဖြေဆိုရန် မည်သို့ ဆက်သွယ်ဖြေဆိုရမည်နည်း။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကွန်ပျူတာအသင်းချုပ်ကို ဆက်သွယ်ရပါမည်။ ရန်ကုန်မှ
ဖြေဆိုသူများအတွက် စာစစ်ဌာနကို မြန်မာအင်ဖိုတက်ခ်တွင် စစ်ဆေးမည်ဖြစ်ပြီး
ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းများမှ ဖြေဆိုသူများကို သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်နှင့်
တိုင်း ကွန်ပျူတာအသင်းများမှ စီစဉ်ဆောင်ရွက်စစ်ဆေးပါမည်။ စာမေးပွဲကြေးမှာ
ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ဧပြီလ (၄) ရက်နေ့ တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ဖြေရသော
စာမေးပွဲတုန်းကတော့ ၁၀၀၀၀ိ/- ကျပ်ဟု သိရပါသည်။
၇။ ၀င်ရောက်လေ့လာဖတ်ရှုသင့်သော ၀က်ဘ်ဆိုက်များမှာ -
ဖော်ပြပါ ရက်စွဲအတိုင်းဖွင့်လှစ်မည် ...
MMFB (မြန်မာဖေ့စ်ဘွတ်ဆိုက်) အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသားများ အပန်းဖြေရေးနှင့် အတူ ပြည်ပမှ Social Networking Site တခုဖြစ်သော Facebook Site အား မိမိတို့၏ MMFB ဖြင့် အစားထိုး နိုင်ရေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ အစီအစဉ်သစ်တခုအနေဖြင့် MMFB Entertainment မီဒီယာဆိုက်ကို လာမည့် အောက်တိုဘာလတွင် ဖွင့်လှစ်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။
ယူကေ ပညာရေး ဆွေးနွေးပွဲ - International College Wales Swansea (ICWS) နှင့် Plymouth Devon International College (PDIC)
Time : *10:00 am ~ 11:45 am*
Date : *24 August 2010 (Tuesday)*
Venue : *Taung-Ngu Room, Level 3, Traders Hotel, Yangon*
Speaker : *Mr. Karl Abbey, Plymouth, UK*
*Register NOW @ AT&S Co., Ltd. - Tel (Ygn) : 521125, 652288, 09-5062171*
အင်္ဂလန်သို့ သွားရောက်ပညာသင်ကြားလိုသော မြန်မာနိုင်ငံမှကျောင်းသား/သူများအတွက်
အင်္ဂလန်နိုင်ငံရှိ International College Wales Swansea (ICWS) နှင့် Plymouth
Devon International College (PDIC) တို့မှတဆင့် အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၏ Highly
Trusted တက္ကသိုလ်များဖြစ်သည့် Swansea University နှင့် University
of Plymouth တို့သို့ တိုက်ရိုက် တက်ရောက်နိုင်မည့် ယူကေ ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲ
တစ်ရပ်အား ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ
တရားဝင်အသိအမှတ်ပြု ပညာရေး အတိုင်ပင်ခံ AT&S Co., Ltd. ထံမှ သိရှိရသည်။
အဆိုပါ ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲအား (၂၀၁၀) ပြည့်နှစ် ၊ သြဂုတ်လ (၂၄)ရက် ၊
အင်္ဂါနေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့ရှိ ကုန်သည်ကြီးများဟိုတယ် ၊ တောင်ငူ ခန်းမ၌ နံနက်
(၁၀) နာရီ မှ (၁၁း၄၅) နာရီ အထိ ကျင်းပပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ဆွေးနွေးပွဲသို့
ICWS နှင့် PDIC တို့မှ တာဝန်ခံအရာရှိတစ်ဦးဖြစ်သူ Mr. Karl Abbey
ကိုယ်တိုင်လာရောက်၍ International College Wales Swansea (ICWS) နှင့်
Plymouth Devon International College (PDIC) တို့တွင်
များအကြောင်း ၊ Swansea University နှင့် University of Plymouth တို့သို့
တိုက်ရိုက် ဆက်လက် တက်ရောက်ခွင့်ရမည့် ဘာသာရပ်များ အကြောင်းကို
ICWS (UK) နှင့် PDIC (UK) တို့တွင် First Year တက်ရောက်ပြီး Swansea
University နှင့် University of Plymouth တို့ရှိ စီးပွားရေးဘာသာရပ်များ၊
အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာဘာသာရပ်များ၊ ဆေးပညာဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်များ၊
အိုင်တီဘာသာရပ်များ၊ ဇီဝဆေးသိပံ္ပဘာသာရပ်၊ ဥပဒေဘာသာရပ် နှင့် နိုင်ငံတကာ
လူမှုဆက်ဆံရေး ဘာသာရပ်များကို ဒီဂရီတန်း နှင့် ဘွဲ့လွန်သင်တန်းများတွင်
ဆက်လက်တက်ရောက် သင်ကြားနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း AT&S Co., Ltd. ထံမှ
Mr. Karl Abbey နှင့် ကျောင်းသားတစ်ဦးချင်း တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီး
ကျောင်းလျောက်ထားလိုပါက မိမိတို့၏ ပညာအထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများကို
ယူကေ ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲကို တက်ရောက်လိုသော ကျောင်းသားများ ၊ မိဘများအနေဖြင့်
ဆွေးနွေးပွဲ တက်ရောက်ရန်အတွက် AT&S Co., Ltd. သို့
ကြိုတင်စာရင်းပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပြီး အသေးစိတ် စုံစမ်းသိရှိလိုပါက အဆောင်(၅) ၊
အခန်း(၄) ၊ မြန်မာအင်ဖိုတက်ခ် ၊ လှိုင်တက္ကသိုလ် နယ်မြေ ၊ ရန်ကုန်မြို့။
(ဖုန်း) ၅၂၁၁၂၅ ၊ ၆၅၂၂၈၈ ၊ ၆၅၂၃၂၀ တို့သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ကြောင်း
ဗုဒ္ဓကို ပူဇော်ခြင်း အဆင့်အမျိုးမျိုး
အဆင့် (၁) ဒါနဖြင့် ပူဇော်ခြင်း -
အဆင့် (၂) သီလဖြင့် ပူဇော်ခြင်း -
(ပ) ကိုယ်ချင်းစာတရားဖြင့် ငါးပါးသီလကို ကိုယ်နှုတ်စိတ်တို့ဖြင့် လုံခြုံအောင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊
(ဒု) (၈)ပါး (၉)ပါး သီလ၊......သံဃာတော်များသည် (၂၂၇)ပါး ၀ိနည်းသိက္ခာတော်ကို ထိန်းသိမ်းခြင်း၊
အဆင့် (၃) သမာဓိဖြင့် ပူဇော်ခြင်း -
ထို့ထက် အဆင့်မြင့်လိုသော ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်
(ပ) ကိုယ်ကျင့်သီလကို ကိုယ်နှုတ်အပြင် စိတ်ကိုပါ သမထဖြင့် (အခိုက်အတန့်အားဖြင့်) ဖြူစင်သန့်ရှင်းစင်ကြယ်အောင် ထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်း၊
(ဒု) ကိုယ်ကျင့်သီလကို သမာဓိဖြင့် (အချိန်ကြာရှည်စွာ) ခိုင်မြဲအောင် ထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်း၊
အဆင့် (၄) ၀ိပဿနာဘာဝနာဖြင့် ပူဇော်ခြင်း -
(ပ) တစ်သံသရာလုံးမှာ ပါလာသမျှ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ (မှားယွင်းနေသောအမြင်၊ မှားယွင်းနေသောအယူများ) ကို သမ္မာဒိဋ္ဌိ (မှန်ကန်သောအမြင်) ဖြစ်အောင် ရှုပွားနိုင်ခြင်း၊
(ဒု) သောတပတ္တိမဂ်ဖိုလ် ဆိုက်ရောက်အောင် ကျင့်ကြံနိုင်ခြင်းမှသည် အရဟတ္တမဂ်ဖိုလ်သို့ ဆိုက်ရောက်အောင် ကျင့်ကြံနိုင်ခြင်း၊
ထို့ကြောင့် "ဗုဒ္ဓနှစ် ၂၆၀၀ ပြည့်" အထိမ်းအမှတ်ကို ပူဇော်လိုသူများသည် အထက်ပါအဆင့် (၁)၊ (ပ) (ဒု)မှသည် အဆင့် (၂)၊ (၃)၊ (၄) (ပ) (ဒု) စသည်တို့ဖြင့် မိမိစွမ်းနိုင်သမျှ (တတ်နိုင်သမျှ) ပူဇော်နိုင်ကြပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းပို့သအပ်ပါသည်။
ကတာ မေ ရက္ခာ၊
ကတံ မေ ပရိတ္တံ။
သောဟံ နမော ဘဂ၀တော။
နမော သတ္တန္နံ သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေါနံ။
ငါသည် ပရိတ်အကာအကွယ်ပြုအပ်ပြီး အန္တရာယ်ပြုမည့် သတ္တ၀ါတွေ နောက်ဆုတ်ကြပါလော့။
ငါသည် ဂေါတမဘုရားရှင်အား ရှစ်ခိုးပါ၏။
၀ီပဿီဘုရား ၊ သိခီဘုရား။
ကကုသန်ဘုရား ၊ ကောဏဂုံဘုရား။
ကုဿပန်ဘုရား ၊ ဂေါတမဘုရား ၊ အရိမေတ္တယျဘုရား။
ဟူသော ( ၇ ) ဆူသော ဘုရားရှင်တို့အား ရှစ်ခိုးပါ၏။
ဤဂါထာတော်သည် ခန္ဓသုတ်တော်မှလာသည် ။ ဤဂါထာတော်ကို အမြဲရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပါက မည်သည့်အန္တရယ်မှ မတွေ့နိုင်။ အထူးသဖြင့် ခရီးသွားခါနီးတွင် ရွတ်၍သွားမည့်လမ်းနေရာအရပ်ကို မေတ္တာပို့ပါ။ အမျှဝေပါ။
အန္တရာယ်ကင်းပြီး ကိုယ့်စိတ်တိုင်းကျ ချမ်းသာစွာ သွားရပါမည်။ အဆင်ပြေကြပါစေနော်။
ဘ၀ဆိုတာကတော့ ကောင်းတစ်ချီ ဆိုးတစ်လှည့်ပေါ့။ အမြဲတမ်းကြီး နေ့မဟုတ်သလို အမြဲတမ်းကြီးလည်း ညမဖြစ်ပါဘူး။ လောကထဲမှာ ရှိနေသရွေ့ကတော့ လောကဓမ္မဆိုတဲ့ လောကဓံတရားတွေနဲ့ ကြုံနေရမှာပါ။ အကောင်းလောကဓံ၊ အဆိုးလောကဓံ နှစ်မျိုးရှိတဲ့အထဲက အကောင်းများများ ကြုံရဖို့ကတော့ ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာ များများလုပ်ဖို့ပါပဲ။ ဒါနက ပြင်ပပစ္စည်း စိုက်ထုတ်ဖို့ လိုပေမယ့် ကျန်တဲ့နှစ်ခုကတော့ လုပ်ချင်စိတ်လေး ရှိရုံနဲ့ လုပ်လို့ရပါတယ်။ ဘာမှလည်း မကုန်ပါဘူး။ အကျိုးလည်း ပိုကြီးပါတယ်။ အဆိုးတွေနဲ့ ကြုံရတယ်ဆိုတာ ဘယ်သူ့ကြောင့်မှ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်သူ့ကိုမှ အပြစ်တင်လို့ မရပါဘူး။ အကုသိုလ်အကျိုး မပေးနိုင်လောက် အောင်ကို ငါ့ရဲ့ ကုသိုလ်တာရိုးက မလုံသေးပါလားလို့ပဲ မှတ်ရပါမယ်။ ပိုလုံအောင်၊ ပိုကောင်းအောင်ပဲ ကြိုးစားရပါမယ်။ ဒီလိုမှ မဟုတ်ဘဲ စိတ်တိုနေမယ်၊ စိတ်ဆင်းရဲနေမယ်ဆိုရင်တော့ အကုသိုလ်အတိုးယူသလို ဖြစ်နေမှာပါပဲ။ ဘ၀ထဲမှာ အလိုက်သင့်နေတတ်ဖို့က အလွန်ပဲ အရေးကြီးပါတယ်။ ဘာသာရေးအသုံးအနှုန်းနဲ့ ပြောရရင် ယောနိသောမနသိကာရ ရှိဖို့ပါ။ ခပ်ပေါ့ပေါ့ပြောရရင် အကောင်းမြင်တတ်ခြင်းပါ။ အဲဒါက ကုသိုလ် ဖြစ်ခြင်းရဲ့ အနီးဆုံး အကြောင်းပါပဲ။ မဂ်၊ ဖိုလ်ကိုတောင် ပေးနိုင်ပါတယ
ဥပမာဆိုရရင် လှိုင်းထန်တဲ့ ရေပြင်ကျယ်ကို လှေငယ်နဲ့ ဖြတ်ကူးတဲ့အခါ လှိုင်းရိုက်တာကို အလိုက်သင့်ခံပြီး လိုရာကို သွားတတ်ဖို့က အလွန်ပဲ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒီလိုမှ မဟုတ်ဘဲ ကန့်လန့်ကြီး သွားခံမယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်လှေပဲ တစ်စစီဖြစ်ပြီး နစ်မြုပ်ဒုက္ခရောက်ရမှာပေါ့။ ဒီလိုပါပဲ လောကဓံ လှိုင်းထန်တဲ့ သံသရာရေကြောကို ဖြတ်တဲ့အခါမှာလည်း ပညာနဲ့ အလိုက်သင့်ခံပြီး လိုရာပန်းတိုင်ကို ရောက်အောင် သွားတတ်ရပါမယ်။ ကြားဖူးတဲ့ စကားလေး တစ်ခွန်းနဲ့ ခိုင်မာအောင် ပြောပါဦးမယ်။
စိတ်ဓာတ်မပြည့်ဝသေးတဲ့သူဟာ ပြဿနာတစ်စုံတစ်ခု ကြုံရရင် သူများကို အပြစ် တင်တတ်တယ်တဲ့။
အထိုက်အလျောက် ပြည့်ဝတဲ့သူကတော့ မိမိကိုယ်ကို အပြစ်တင်တတ်တယ်တဲ့။
လုံးဝပြည့်ဝပြီးသူများကတော့ ဘယ်သူ့ကိုမှ အပြစ်မတင်တော့ဘူးတဲ့။
လောကဓမ္မကို အမှန်အတိုင်း သိမြင်ပြီး မတုန်မလှုပ် လက်ခံသွားနိုင်တာပါ။ ဒါကို အလိုက်သင့် ခံယူတတ်တယ်လို့ ဆိုချင်တာပါ။ လောကမှာ အန္တရာယ်များတဲ့ ရေလမ်းခရီးကို သွားတဲ့အခါ ကိုယ့်လှေလေးကိုယ် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်၊ ခိုင်သထက် ခိုင်အောင် ပြင်ဆင်၊ ရိက္ခာတွေ စိတ်တိုင်းကျ ဖြည့်တင်းပြီးမှ သွားကြသလို မိမိတို့ရဲ့ ရှေ့ဆက်ရမယ့် သံသရာခရီးကြီးအတွက် ပစ္စုပ္ပန်ဘ၀ ဆိုတဲ့လှေလေးကို ကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်၊ ခိုင်သထက် ခိုင်အောင် ပြင်ဆင်၊ ရိက္ခာတွေ ဖြည့်တင်းထား ရပါမယ်။ ရိုးရိုးခရီးက ကိုယ်စိတ်တိုင်းကျတဲ့နေ့မှ သွားလို့ရပေမယ့် သံသရာခရီးက ဘယ်အချိန် သွားရမယ်ဆိုတာ ကြိုမသိနိုင်တဲ့အတွက် အမြဲအသင့်ဖြစ်နေဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ သတိတရားလေး လက်ကိုင်ထားပြီး ကိုယ့်စိတ်ကိုယ် ကုသိုလ်ဖြစ်တိုင်း၊ အကုသိုလ်ဖြစ်တိုင်း အတတ်နိုင်ဆုံး သိနေပေးမယ်ဆိုရင် သတိပဌာန်တရား ပွါးများပြီးဖြစ်လို့ လှေကတော့ ခိုင်ပါပြီ။ ဒါန၊ သီလ ရိက္ခာတွေပါ တင်ထားပြီးပြီဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အစိုးမရတဲ့ဘ၀မှာ သူက ဘယ်အချိန် လာထွက်ခိုင်း၊ ထွက်ခိုင်း ကျေကျေနပ်နပ်ကြီး သွားလို့ရပြီပေါ့။
စာဖတ်သူများအားလုံး ဘ၀ထဲမှာ အလိုက်သင့် နေတတ်ထိုင်တတ်ရှိနိုင်ကြပါစေ။
ဓမ္မရနံ့ဆိုက်မှ ပြန်လည်တင်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
Ifaman runs after money, he is moeny man.
If he keeps it, he is capitalist.
ငွေရှာပြီး စုဆောင်းတော့၊ ဓနရှင်ဖြစ်ပြန်ရော။
If he spends it, he isaplay-boy.
ငွေဖြုန်းတော့ လူ့ဘော်ကြော့လို့ ပြောကြတယ်။
If he doesn't get it, he lacks ambition.
ငွေရှာလို့ မရတော့၊ လူပျော့လူညံ့လို့ ကင်ပွန်းးတပ်ကြတယ်။
If he gets it without working, he is parasite.
ငွေက အလိုလို အိမ်ပေါ်ရောက်လာတော့၊ အချောင်သမားဘွဲ့ထူးပေးကြတယ်။
If he gets it after of hard labour, he isafool who gets nothing from life.
ငွေကို အပတ်တကုတ် ကြိုးစားရှာတော့ ကျွန်ဇာတာပါတဲ့သူဆိုပြီး မေးငေါ့ကြပြန်ရော.......
ref : English Digest 1955
ကဲ သင်ကော ဘယ်လို မြင်လဲ။
ရာဇလင်းဆေးတက္ကသိုလ် ပညာသင်ဆု အောက်တိုဘာလကုန် နောက်ဆုံး လျှောက်ထားနိုင်
ဆေးတက္ကသိုလ်တက်ရောက်ခွင့်ရရှိကြသည့် ကျောင်းသားများအားနှစ်စဉ်ပညာသင်ဆု ပေးအပ်နေသော ရာဇာလင်းဆေးတက္ကသိုလ်ပညာသင်ဆုအတွက် ကျောင်းသားရှစ်ဦးကို ရွေးချယ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပညာသင်ဆုပေးအပ်သူဦးအေးကျော်ကပြောသည်။ ပြည်တွင်းရှိ ဆေးတက္ကသိုလ်များတွင် ပထမနှစ် သင်တန်းစတင်တက်ရောက်ရန် အရည်အချင်းပြည့်မီသော်လည်း ဆင်းရဲနွမ်းပါး၍ ပညာဆက်လက် ဆည်းပူးရန် အခက်အခဲရှိသူများအနေဖြင့် အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်နောက်ဆုံးထား၍ အမှတ် (၅ဝ) ကန်ရိပ်သာ (၃) လမ်း၊ Finger Lake, FMI City၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်သို့ ပေးပို့လျှောက်ထား နိုင်ကြောင်း သိရသည်။ "နိုဝင်ဘာလထဲမှာ ခေါ်စာပို့ပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာလဆန်းမှာ အင်တာဗျူးလုပ်ပါတယ်။ အင်တာဗျူးအတွက် ၂၄ ယောက်ခေါ်ပြီး အဲဒီထဲက တစ်ယောက်ကို ရွေးချယ်ပါတယ်" ဟုဦးအေးကျော်ကပြောသည်။ ပညာသင်ဆုရရှိသူများကို ပထမနှစ်မှ ဘွဲ့ရသည်အထိ သတ်မှတ်စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများနှင့် ညီ လစဉ်ပညာသင် ထောက်ပံ့ကြေးကျပ်ငါးသောင်းချီးမြှင့်သွားမည်ဖြစ်သည်။ လျှောက်ထားလိုသူများသည် မိမိအမှန်တကယ် ပညာသင်ဆုလိုအပ်ကြောင်း ကြောင်းကျိုးပြည့်စုံစွာ ဖော်ပြထားသော ကိုယ်တိုင်ရေးလျှောက်လွှာ၊ အကျင့်စာရိတ္တ ကောင်းမွန်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်ရဲစခန်းနှင့် ကျောင်းအုပ်ကြီးတို့၏ ထောက်ခံချက်မူရင်းများ၊ အမှတ်စာရင်းမိတ္တူ၊ ပတ်စပို့အရွယ်ဓာတ်ပုံ နှစ်ပုံ၊ ကျောင်းသားနှင့် မိဘအုပ်ထိန်းသူ တို့၏ ပါတီနိုင်ငံရေးကင်းရှင်းကြောင်း ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံချက် အထောက်အထားများ နှင့်အတူ လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ပညာသင်ဆုသည် ၂ဝဝ၈-၂ဝဝ၉ ပညာသင်နှစ်မှ စတင်ပေးအပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး နှစ်စဉ်ကျောင်းသား ရှစ်ဦးကို ရွေးချယ် ပေးအပ်လျက်ရှိသည်။
ရေးသားသူ: yamin| အကြောင်းအရာ: ဗဟုသုတ
၁။ လူ့ဘ၀ဧ။် အကြီးမားဆုံးသော ရန်သူသည် မိမိကိုယ်တိုင် ပင်ဖြစ်သည်။
၂။ လူ့ဘ၀ဧ။် အကြီးမားဆုံးသော ဆုံးရှုံးခြင်းသည် မိမိဧ။် မာနကြောင့်ဖြစ်သည်။
၃။ လူ့ဘ၀ဧ။် အကြီးမားဆုံးသော အသိမဲ့ခြင်းသည် မိမိ ကိုယ့်ကိုမိမိ လိမ်လည်နေခြင်းဖြစ်သည်။
၄။ လူ့ဘ၀ဧ။် အကြီးမားဆုံးသော ၀မ်းနည်းရခြင်းသည် မိမိဧ။် မနာလို ၀န်တိုသောစိတ်ကြောင့်ဖြစ်သည်။
၅။ လူ့ဘ၀ဧ။် အကြီးမားဆုံးသော မှားယွင်းမှု လုပ်ရပ်သည် မိမိဧ။် စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
၆။ လူ့ဘ၀ဧ။် အကြီးမားဆုံးသော ပြစ်မှုပြုခြင်းသည် မိမိဧ။် အနိုင်ကျင့်လိုသော စိတ်ဓာတ်ကြောင့် ဖြစ်သည်။
၇။ လူ့ဘ၀ဧ။် အကြီးမားဆုံးသော သနားစရာကောင်းခြင်းသည် မိမိဧ။် စိတ်အားငယ်မှုဖြစ်သည်။
၈။ လူ့ဘ၀ဧ။် အကြီးမားဆုံးလေးစားခံရခြင်းသည် မိမိဧ။် ကြံ့ခိုင်သည့် စိတ်ဓာတ်ဖြစ်သည်။
၉။ လူ့ဘ၀ဧ။် အကြီးမားဆုံး စီးပွားပျက် ရခြင်းသည် မိမိဧ။် ကိုယ်ပိုင်အနာဂတ်မျှော်လင့်ချက် ကင်းမဲ့ခြင်း ကြောင့်ဖြစ်သည်။
၁၀။ လူ့ဘ၀ဧ။် အကြီးမားဆုံးသော ချမ်းသာရခြင်းသည် မိမိဧ။် ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ခြင်းဖြစ်သည်။
၁၁။ လူ့ဘ၀ဧ။် အကြီးမားဆုံးသော အကြွေးသံသရာ ဖြစ်ခြင်းသည် လူမှုရေးအကြွေးသံသရာဖြစ်သည်။
၁၂။လူ့ဘ၀ဧ။် အကြီးမားဆုံးသော လက်ဆောင်မွန်သည် မိမိဧ။် သည်းခံခွင့် လွတ်တတ်သောစိတ်ဓာတ် ဖြစ်သည်။
၁၃။လူ့ဘ၀ဧ။် အကြီးမားဆုံးသော လိုအပ်ချက်သည် မိမိဧ။် အကြင်နာတရား မေတ္တာစိတ်ဓာတ်ဖြစ်သည်။
၁၄။ လူ့ဘ၀ဧ။် အကြီးမားဆုံးသော ပီတိသည် အလှူဒါန ပြုခြင်း ဖြစ်သည်။
The Rules for Health
(1) Eat moderately and chew your food well.
မျှမျှတတစား၊ အစားအသောက် ကြေညက်အောင်ဝါးပါ။
(2) Take deep brealth of fresh air.
(3) Sleep eight hours withawindow open.
ပြတင်းပေါက်ဖွင့်ပြီး ၈ နာရီလောက် အိပ်ပါ။
(4) When walking upstairs, go slowly.
(5) Cleanes the bowels daily.
(6) Avoid the use of drugs.
(7) Give yourself some recreation daily.
မိမိကိုယ်ကို နေ့စဉ် အနေအထိုင် အသွားအလာပြုပြင်ပါ။
(8) Look on the bright side od life.
ဘ၀ခရီး သာယာချမ်းမြေ့အောင် ရည်စူးပါ။
Royal Readers 1922
Information Security ဟောပြောပွဲအကြောင်း
ရေးသားသူ: yamin| အကြောင်းအရာ: နည်းပညာ, မျှဝေခြင်း
၇ ရက် ၈ လ ၂၀၁၀ ခု စနေနေ့ နေ့လည် ဟောပြောပွဲကို ၂ နာရီမှ စတင်ခဲ့ပါတယ်။ အရင်ဆုံး ပြောကြားတဲ့သူကတော့ ဦးရဲကျော်သိန်းဖြစ်ပါတယ်။
- Secure Sockets layer/Transport layer Security (SSL/TLS)
- Secure Hypertext Transfer Protocol (S- HTTP)
- Linghtweight Directory Access Protocol(LDAP)
- Files Transfer
- File Transfer Protocol(FTP)
- Remod Access Service (RAS)
- Hardware base Virtual Private Network (VPN)
- IDS Plan (network bases/ host base)
- Active/Passive/Pro active Protection
- Secure OS/NOS
- ACL (important Security)
- Algorithms are the underlying foundation of cryptography
SQL Injection to Bank Sites
- Computer Virues - Network worms-
- Trojan Horses - Logic Bombs
- Address Book Theft - Hijacked Home Pages
- DNS Poisoning - Zombies, IP Spoofing
- Password Grabbers - Denial of Service Attacks
- Buffer Overruns - Password Crackers
- Personal Steps to Protect Your Cyber Information
- Keep your password secret
- Backup important files
- Know who to Protect your family
- Consider setting parental controls
- Tech your children never to give out personal
- Unique-in access - Remote access security
- Passwords - Safe e-mail use
- Workstation Security - safe internet use
- Portable device Security
- Report security incidents and stolen devices
- Clean data off computers berfore reycling
- Business Continuity Planning - Personal Security
- Security isaProcess
- Security is Physical, Social and Technical
- Standard based Qulity focus
- Preventipn +, Detection+, Response
- Applications and particularly Client
- Why do we need security?
- Who is - nerable?
- Common security attacks and counter measures
- Firewalls & Intrusion Defetion System
- TCP Attacks
- Findingaway into the network
- Exploiting software bugs, buffer overflows
- Intrussion Detection Systems
- Ingress fillering, IDS
- TCP hijacking
- Packet snifing
- Encryption (SSH, SSI, TTPS)
- 1960 US DoD(ARPA)
- Kleinrock 1964
- 200 hosts in ARPA (1970) (conference)
- E-mail 1972
- Telenet (late 1972)
- IBM SNA (1974)
- EThernet (1973 - 76)
- 1983 (NCP- TCY/IP)
- 1990 (www)
- 200 Web Server (1992)
- 1996 browser war
- 1995- 2001 (Interent in financial market)
- ဘာတွေဘယ်လို ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရမယ်
- ဒေတာတွေ ထပ်သိမ်းမယ်/ ပြုပြင်မယ်
- တကယ်လို့ တစ်ခုခုဖြစ်သွားခဲ့ရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာတွေ အပြင် policies ကို အဓိက လေ့လာသင့်ကြောင်း၊ ဘယ်လောက်အရေးကြီးသလဲဆိုတာ သိထားဖို့ လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းတွေအပြင်
Step 1 - Securire
- login policies
- Mail policies
- Web policies
- Wireless policies,..... etc
မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း အသိအမှတ်ပြု စာမေးပွဲများ
MCPA အသိအမှတ်ပြု စာမေးပွဲဆိုတာ ဘာလဲ?
မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းက ကြီးမှူးပြီး
- ကွန်ပျူတာ ပညာရှင်များ ကွန်ပျူတာပညာရပ်နှင့်ပတ်သက်၍ နားလည်ပြီး
- သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာနယ်ပယ်တွင် နားလည်တတ်ကျွမ်းသူတစ်ယောက်အဖြစ်
အသိအမှတ်ပြုစေရန် ရည်ရွယ်၍ ကျင်းပခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
MCPA က ဘာစာမေးပွဲတွေကို ကျင်းပနေလဲ?
MCPA အနေနဲ့ Software Engineering နဲ့ Network Engineering တို့အတွက်
စာမေူးပွဲများကို ကျင်းပပေးနေပါတယ်။ ယခုအခါမှာ
- MCPA Certified Fundamental Engineer
- MCPA Certified Network Associate အောင်လက်မှတ်များပေးမည့် စာမေးပွဲ
(၂) ခုကို ကျင်းပပေးလျက်ရှိပါတယ်။ ထိုစာမေးပွဲများမှာ အိုင်တီနယ်ပယ်သို့
စတင်ဝင်ရောက်ရန်အတွက် လိုအပ်ချက်များ ပြည့်စုံမှုကို စစ်ဆေးပေးသော
စာမေးပွဲများကို နှစ်စဉ် ဇွန်လနှင့် ဒီဇင်ဘာလများမှာ ကျင်းပပါတယ်။
MCPA အသိအမှတ်ပြု စာမေးပွဲအောင်ရင် ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရမှာလဲ?
- မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အကြီးဆုံး IT Professional Body ရဲ့ အသိအမှတ်ပြု
- မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာအသင်းချုပ်မှ စီစဉ်သော
MCPA စာမေးပွဲဖြေဆိုရင် အရည်အချင်း ကန့်သတ်မှုရှိပါသလား?
- တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲအောင်မြင်ပြီး ဘွဲ့ရပြီးနောက် အိုင်တီပညာကို
စိတ်ဝင်စား၍ အိုင်တီနယ်ပယ်သို့ ၀င်ရောက်ရန် ကြိုးပမ်းနေသူများ
- ကွန်ပျူတာနှင့် နည်းပညာတက္ကသိုလ် ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ
- အိုင်တီနယ်ပယ်တွင် လက်တွေ့လုပ်ကိုင်သူများ ဖြေဆိုရန် သင့်လျော်ပါတယ်။
MCPA စာမေးပွဲ ဖြေဆိုရင် ဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲ?
MCPA Certified Fundamental Software Engineer စာမေးပွဲအတွက်
Allocation of Question to the Knowledge Area.
1. Computing Fundamental 20%
2. Programming Concepts 30%
3. Networking Essential 15%
4. Relational Database Model and SQL 35%
Development of Program in Java Language.
Understanding of ROM.
Development of SQL Standards using SQL 92 Standard.
MCPA Certified Network Associate
1. Desktop PC Hardware	20%
2. Desktop OS	10%
3. Networking Fundamental	25%
4. NOS and Network Environment	20%
5. Network Management	15%
6. WLAN	10%
7. WAN Technologies	5%
8. Network Security	5%
မိမိကိုယ်တိုင် လေ့လာဖြေဆိုလျှင် MCPA မှ ထုတ်ပြန်ထားသော
စာမေးပွဲလမ်းညွှန်များနှင့် ရည်ညွှန်းထားသော စာအုပ်များ၊
Information Security ဟောပြောပွဲကျင်းပမည်
ရေးသားသူ: yamin| အကြောင်းအရာ: နည်းပညာ, သတင်း
သတင်းအချက်အလက် နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင် အသင်း မှ ကြီးမှူး၍ မျက်မှောက်ခေတ် ICT/ Internet နည်းပညာရပ်များ၏ နောက်ကွယ်ရှိ သတင်းအချက်အလက်ပိုင်းဆိုင်ရာ လုံခြုံရေးစနစ်များ၊ Cyber Threats များ၊ ကွန်ပျူတာ၊ အင်တာနက်အသုံးပြုသူတိုင်း သိသင့်သိထိုက်သော Fundamental Security Concepts များအကြောင်း၊
နည်းပညာရပ်များကို အခြေခံသော မတူညီသော Cyber နှောင့်ယှက်မှုများ၊ ကာကွယ်ရေး စနစ်များအကြောင်းတို့ကို အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ သြဂုတ်လ (၇)ရက် (စနေနေ့) နေ့လည် (၂း၀၀) နာရီ မှ (၅း၀၀)နာရီအထိ ရန်ကုန်မြို့၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ မြန်မာအင်ဖိုတက်ခ်၊ ပင်မဆောင်ရှိ အခန်း(၂၀၅) တွင် မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာ ပညာရှင်အသင်း မှ အလုပ်အမှုဆောင်များဖြစ်သည့် ဦးဇော်ဝင်းထွန်း၊ ဦးအောင်ဇော်မြင့်နှင့် ဦးရဲကျော်သိန်း တို့မှ "Information Security" ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ရှင်းလင်းဟောပြောမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဆွေးနွေးဟောပြောပွဲသို့ မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း အသင်းဝင်များ၊ ကွန်ပျူတာ ပညာရပ်အထူးပြု ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၊ ရုံးလုပ်ငန်းများတွင် သတင်းအချက်အလက်နှင့်
ကွန်ယက်လုံခြုံရေးလုပ်ဆောင်နေရသော Network Admin များ၊ Network နှင့် Information Security ကိုစိတ်ပါဝင်စားသူ မည်သူမဆို (အခမဲ့) တက်ရောက်ဆွေးနွေး နိုင်သည်။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းရုံးခန်း၊ အဆောင်(၄)၊ အခန်း(၄)၊ ဖုန်းနံပါတ်-၆၅၂၂၇၆ သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်သည်။
လောကမှာ အနေတတ်ပြီး ပျော်ရွှင်ဖို့နည်း
လူဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ပိုင် သီးသန့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးများကို ငါကွလို့
ပြလိုက်ရရင် အလွန်ပျော်တတ်တာပါပဲ။ တခြားနာမည်ကြီးတွေကို
လိုက်လုပ်တာမျိုးမှ မဟုတ်တာကိုး။ ဒီလိုပါပဲ ယောက်ျားဆိုရင်
မာမာထန်ထန်ဖြစ်ရမယ်။ မိန်းမကတော့ ပျော့နဲ့နဲ့လို့ အဲလို
ဥပမာ မြင်ယောင်ကြည့်လိုက်။ အသုဘလိုက်ပို့ဖူးတယ်မဟုတ်လား။ မိန်းမတွေ
ငိုနေ၊ ယောက်ျားတွေကတော့ မာတင်းတင်းမျက်နှာပေးတွေနဲ့လေ။ ယောက်ျားပဲကွာ
ခံစားမှုကို ဘယ်ထုတ်ဖော်လို့ကောင်းမလဲ။ မိန်းမက ခံစားရသမျှ
ဖော်ပြရတာချည်းပဲ။ အဲသလို သဘာဝလောကက သမားရိုးကျ
မျှော်လင့်ထားကြတဲ့အတိုင်း နေကြရတာပဲ မဟုတ်လား။ ဒါပေမယ့် ခက်နေတာက
လူတိုင်း လူတိုင်း မျှော်လင့်ထားတာတွေနဲ့ မကိုက်ညီနိုင်တာပါပဲ။
အော်ငိုချင်ပေမယ့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အတင်းချုပ်ထားရတဲ့ ယောက်ျားဟာ
တကယ်တော့ မာလှသူမှမဟုတ်တာ။ သူက အများ မျှော်လင့်ချက်နဲ့ကိုယ်အောင်
ဟန်ဆောင်ထားသူပဲ။ အဲ မိန်းမတွေလည်း ဒီအတိုင်းပဲပေါ့။ သူလည်း
သူ့စိတ်ခံစားမှုကို ဖော်ထုတ်ဖို့ ၀န်လေးချင် ၀န်လေးမှာပေါ့။
နောက်တစ်ခုက ကိုယ်သွားမယ့်ပန်းတိုင်ကို တခြားလူတွေ သတ်မှတ်ပေးလို့
ဘယ်ဖြစ်မလဲ။ တခြားသူ တွေးတောတာနဲ့ ကိုယ်ညီအောင်ရယ်လို့
ကိုယ့်ရည်မှန်းချက်ကို မချမိပါစေနဲ့။ ကိုယ်အမှန်တကယ် ဘာစိတ်ဝင်စားသလဲ၊
ကိုယ်နဲ့ ကိုက်ညီတာသာ လုပ်ပါ။
ကျွန်မ ဒီအကြောင်းကို ဘာကြောင့်ပြောရသလဲဆိုတော့ အစ်ကိုတစ်ယောက်က
ပြောဖူးတယ်။ ညီမလေးတဲ့ သူလည်း ညီမလေးလို့
ဆိုက်လေးတစ်ခုလောက်လုပ်ချင်တယ်တဲ့ ကဲ ဟုတ်ပြီ လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်
ကူညီမယ်ပေါ့။ မေးလိုက်တယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ချင်လဲ ဘာအကြောင်းတွေရေးမယ်လို့
စိတ်ကူးသလဲလို့ မေးတော့ မသိဘူးတဲ့။ သူ့ကို အကြံပေးပါတဲ့။ ဒီတော့
ပြန်မေးကြည့်သင့်တယ်နော်။ စဉ်းစားကြည့်လေ ကိုယ်ဘာဖြစ်ချင်လဲ
ဘာလုပ်ချင်တယ်ဆိုတာ မသိဘဲ ဘာလို့ အရာတစ်ခုကို အစကနေ ဖန်တီးချင်ရတာလဲ။
သူများလုပ်လို့ လိုက်လုပ်တာထက် ကိုယ့်ရဲ့စိတ် ကိုယ့်ရဲ့ပန်းတိုင်
ရည်ရွယ်ချက်မရှိပဲ ဘယ်အရာပဲလုပ်လုပ် အချိန်ကုန်ရုံသာ အဖတ်တင်မှာပေါ့။
ကျွန်မအနေနဲ့လည်း ကိုယ့်စိတ်နဲ့မတူတဲ့လူတွေကို အကြံဥာဏ်ပဲ ပေးလို့ရမယ်
ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ဘယ်တော့မှ မချမှတ်ပေးပါဘူး။
ဥပမာ ကျွန်မ အိပ်မက်တစ်ခုမက်တယ်ဆိုပါစို့။ အိပ်မက်က အရမ်းကောင်းတော့
တခြားသူကလည်း မက်ချင်တယ် သူ့ကို လွှဲပေးပါပြောလာရင် ဒီအိပ်မက်က ကျွန်မကို
မမက်နဲ့ သူ့ကို လွှဲပေးလိုက်ပါလို့ ပြောလို့ရပါသလား။ တခြားသူတွေရဲ့
အတွေးအတောနဲ့သာ ညီအောင် လုပ်ရရင်တော့ လူတိုင်း ကောင်းသောနေခြင်းနဲ့
ဒီတော့ ကိုယ့်ဘ၀မှာ ပျော်ရွှင်ဖို့ အတွက်တော့ လုပ်သမျှတိုင်း
အောင်မြင်လိုက်တာလို့ ဖြစ်စရာ မလိုပါဘူး။ ကိုယ့်ဘ၀ပေါ်
ကိုယ်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် ပြီးတာပါပဲ။ ကိုယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်
ကိုယ့်နေရာအတွက် ကိုယ်တာဝန်ယူတယ်လို့ ခံစားရရင် ပျော်တာပါပဲ။
ပျော်ရွှင်နေတဲ့သူအတွက် အသက်အရွယ် အချိန်ကာလဆိုတာ မလိုအပ်ဖူးလို့လည်း
Information Technology Professional Examination Co...
ယူကေ ပညာရေး ဆွေးနွေးပွဲ - International College Wa...
ရာဇလင်းဆေးတက္ကသိုလ် ပညာသင်ဆု အောက်တိုဘာလကုန် နောက်ဆ...
မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း အသိအမှတ်ပြု စာ...